Agreedo: Ime ka nzukọ na-arụpụta ihe | Martech Zone
Agreedo: Ime ka nzukọ na-amịpụta mkpụrụ
Sunday, October 9, 2011 Sunday, October 9, 2011 Douglas Karr
Mgbe m na-arụrụ nnukwu ụlọ ọrụ ngwanrọ ọrụ, akwụsịrị m ịga nzukọ dị ka ule. Ndị ọrụ Nlekọta Ngwaahịa nwere nzukọ emebere izu niile yana oge ụfọdụ 8 awa zuru oke kwa ụbọchị… nzukọ na ndị ahịa, ahịa, ahịa, mmepe na nkwado. Ọ bụ ara. Ọ bụ ara n'ihi na nzukọ hụrụ n'anya izute mana enweghị n'ezie ijide ndị ọrụ ha aza ajụjụ iji mezuo ihe obula na nzuko.
Ya mere, ruo izu 2 abịaghị m nzukọ ọ bụla. Ndị mere ga-asị na m bụ n'ebe ahụ, ụfọdụ ngalaba-ọrụ ga-egwuregwu ma ọ bụ were iwe banyere ya… ma n'ikpeazụ, m onyeisi n'oge na-adịghị eche. Ọ chọghị ịma n'ihi na m arụpụtaghị nke ukwuu. Nsogbu bụ na nzukọ nọ na-akpọnwụ nzukọ organization ma kpọnwụrụ m. N'ihi gịnị? N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe - ọ dịghị mgbe a gụrụ ndị mmadụ akwụkwọ banyere mgbe ha ga-eme nzukọ ma ọ bụ otu ha ga-esi nwee nzukọ na-arụpụta ihe. O di nwute, obughi ihe ha na akuziri na mahadum.
Enwere m edere banyere nzukọ ezi a bit… ha a Pita peeve nke m. Ọbụna m mere ngosi na nzukọ bụ maka ọnwụ nke arụpụtaghị America. O bukwa ihe ozo mere m ji hu a Nsonaazụ Naanị Ọnọdụ Ọrụ. Ọ bụrụ na nzukọ ezighi ezi ma hazie ya, ha ga-egbusi oge niile. Ọ bụrụ na ị nwere mmadụ ise n’ime ụlọ n’ụlọ ọrụ, ọ ga-ekwe omume na nzukọ gị na-efu $ 5 otu elekere. You ga-enwe ọtụtụ ma ọ bụrụ na i chere banyere ya otu ahụ?
Ugbu a enwere ike ịnwe ụfọdụ teknụzụ nwere ike inyere nzukọ gị aka. Kweta bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ dị ka ọrụ (SaaS) nke na - enyere gị aka ijide n’aka na - ahazi nzukọ gị nke ọma, nsonaazụ na - arụ ọrụ, na - arụkọ ọrụ ma na - arụpụta ihe niile.
Tupu nzukọ ahụ: AgreeDo na enyere gi aka imehe nzuko nzuko. Kwe ka ndị niile sonyere na-emekọ ihe a na-eme tupu nzukọ a, ka onye ọ bụla wee kwadebe.
N'oge nzukọ: Ma ọ bụ nzukọ oge niile, ma ọ bụ mkparịta ụka ad-hoc, were oge nzukọ gị jiri AgreeDo. Ọ na - enyere gị aka ijide nsogbu niile dị mkpa dịka ọrụ, mkpebi, ma ọ bụ naanị ederede.
Mgbe nzukọ ahụ gasịrị: Zipu oge nzukọ a maka ndị niile bịaranụ ma rụkọta ọrụ na nsonaazụ ahụ. AgreeDo-enyere gị aka soro ọrụ aga-eme na ka ịtọọ oge ị na-esochi nzukọ.
The interface nke Kweta na-adabere na nsonaazụ:
Ma ị nwere ike ịlele nzukọ nzukọ gị n'oge ọ bụla n'ime interface:
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-ata ahụhụ nzuko ma chọọ enyemaka ụfọdụ, na-amanye ndị ọrụ gị ka ha jiri AgreeDo nwee ike gbanwee nzukọ gị! Debanye aha maka AgreeDo n'ihi na free.
Tags: ịda mbà n'obiudonchedorekwụsie ikeUsoro isiokwu
Ebe Ndi mmadu ji Smartphone ha eme ihe
Ingghọta iPhone Ọrụ